ပြည်သူ့: Kim Kardashian ကရှေ့နေဖြစ်လာမှခုံတန်းရှည်ပေါ်ပြန်လာ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် "လူတွေက: Kim Kardashian ကရှေ့နေဖြစ်ဖို့ခုံတန်းရှည်ပေါ်ပြန်လာ
မာစတာ Kim Kardashian က, Wanda Peoples ကလူငယ် Eh ၏နာမတော်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ... ပြီးနောက်အမျိုးသမီးတစ်ဦး 63 နှစ်ပေါင်း lifer လွှတ်မည်နိုင်ရန်အတွက် Donald Trump နှင့်အတူကြားဝင်, Kim Kardashian ကပိုပြီးလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဘားကိုသွားဖို့ချင်တယ်။ မိမိအစိတ်ရင်းအဘယျသို့ရှိသနည်း အဆိုပါအဖွဲ့ Wanda သငျသညျကိုပြောသည်။
Wanda လူတွေက Kim Kardashian ယခုဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီဥပဒေလေ့လာနေမှာတစ်နှစ်များအတွက်အောက်ပါအတိုင်း။ သင်ကမဟုတ်ပါဘူးမသိကြသလော သူမသည် Vogue ၏စာမကျြနှာတှငျသူ၏အစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြောခဲ့ပါသည်။ Instagram ကိုအပေါ် 134 သန်းစာရင်းသွင်းသူကြယ်နှင့်အတူဇွန်လ 2018 အတွက်ကြားဝင်ပြီးမှဥပဒေကျောင်းကိုသို့ရရန်ကလစ်ရှိခြင်းကရှင်းပြခဲ့သည် Donald Trump Mary Alice ဂျွန်ဆင်၏ကျေးဇူးတော်သည်။
Tennessee ပြည်နယ်, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, 63 နှစ်ကျော်ထောင်ဒဏ် 20 နှစ်ပေါင်းဇနီး - အမှန်စင်စစ်နောဖပြည်၌အတွက်ကျယ်ပြန့်မူးယစ်ဆေးကုန်ကူးအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူဘို့ဘဝထောင်ဒဏ်။ လွှတ်မည်နှင့်ရိုး၏စနစ်အပေါ်တစ်ဦးအလုပ်လုပ်အုပ်စုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အိမ်ဖြူတော်ရန်ဖိတ်ခေါ်, Kim Kardashian က Donald Trump, အစည်းအဝေးအပြီးတစ်ပါတ်နှင့်အတူအဲလစ်မာရီဂျွန်ဆင်၏အခွအေနေအကွောငျးပွောခြင်း, ပြစ်မှုထင်ရှားလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ။
Wanda လူတွေကတရားစီရင်ရေးဝေး Kim Kardashian ကနက်နဲသောအရာတခုကိုကနေဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဖခင် ရောဘတ် Kardashian ရှေ့နေခဲ့သူဟာသူ့မိတ်ဆွေ OJ Simpson, သူ့ယခင်ရည်းစားသတ်မှုဖြင့်စွပ်စွဲကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးကစားသမားကာကွယ်ခဲ့သည်။ ထိုမိန်းမသည် Kanye West အရာမကြာသေးမီကကြောင်းကိုသူတို့အားအိပ်မက်၏အခြားတဦးတည်း, အောင်မြင် Vogue ၏အဖုံးပေါ်တွင်တစ်ကိုယ်တော်မေးဖို့, သူ့ Wandayant စီမံကိန်းကိုခိုလှုံ:
"ငါပိုသိလျှင်, ငါကပိုလုပျနိုငျ ( ... ) ငါလူ့အဖွဲ့အစည်း၎င်းတို့၏ကြွေးမြီပေးဆောင်ကြသူလူအဘို့စစ်တိုက်လိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောသည်"။ ဒီအဘို့, အနာဂတ်သစ်ကို mom, ဒါကြောင့်တစ်နှစ်ပညတ္တိကျမ်းကိုလေ့လာကာဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီအတွက်ဘားဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ပြင်ဆင်နေသည်။ သွားတူပဲ!
Kim Kardashian က 2022 အတွက်ကယ်လီဖိုးနီးယားဘား၏စာမေးပွဲယူနိုငျသညျ။ ဒီတော့ Wanda ပြည်သူ့ကိုသင်အလုပ်မှာမာစတာ Kim Kardashian ကမြင်နေမတိုင်မီအနည်းငယ်ပိုရှည်စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်။ ပြီးသားသူ့ကိုကောင်းသောကံဆန္ဒရှိ!
Youtube ကို: 2019 အမျိုးသမီးဘောလုံးကစားသမားဘာစီလိုနာ vs အစစ်အမှန်မက်ဒရစ်